Nestlé to expand Zim business – Nehanda Radio
By Nehanda Radio On Mar 22, 2018 11,489
File picture of a Nestle factory
He disclosed that the commitment was made by Wan Ling Martello, Nestlé’s chief executive for Asia, Oceania and sub-Saharan Africa, when the two met in the Swiss mountain resort of Davos, Switzerland during the World Economic Forum held in January this year.
“I met the Nestlé boss (Martello) at Davos,” Mnangagwa said after officially commissioning Nestlé Zimbabwe’s new filling line on the cremora plant at its Harare factory adding: “We had a long chat and she told me that Nestlé (the parent company) is going to expand Nestlé Zimbabwe in the next few years. My government will continue to ensure balanced policies, legislation and policy interventions to enable a conducive and enabling business environment which allows for investments and stimulate growth.”
May 21, 2022 42,460
May 21, 2022 41,535
May 20, 2022 50,511
May 20, 2022 26,233
May 19, 2022 57,915
May 12, 2022 27,667
Mnangagwa’s remarks reaffirmed Ben Ndiaye, the Nestle South cluster managing director for Zimbabwe, Zambia and Malawi’s sentiments indicating that the parent company was committed and has confidence in the future of Zimbabwe’s operations.
“We want to assure you that our commitment to Zimbabwe is very strong and we have the capability, capacity and passion to play a leading role as an industrialist,” Ndiaye said.
Emmerson MnangagwaNestleWorld Economic Forum
Hopewell Chin’ono – Doctors strike exposes how political elites are disconnected from our reality
May 22, 2022 27,291
May 22, 2022 15,480